Madaxweynaha Jubaland iyo Safiirka UK oo Nairobi ku kulmay. - Horseed Media
Madaxweynaha Jubaland iyo Safiirka UK oo Nairobi ku kulmay.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ma safiirka dalka Ingiriiska ee Soomaliya mudane Benfender ayaa Magaalada Nairobi kuwada yeeshay Kulan gaar ah.
Kulanka dhexmarey Madaxweynaha iyo safiirka ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wadada hadleen xaalada guud ee dalka, Doorashada 2020/2021, Xiriirka Dowlada federaalka iyo Dowlad goboleedyada iyo arrinta ay DFS ahi ka wado qaar kamid ah degmooyinka gobolka Gedo.
Sidoo kale Madaxweynaha iyo Safiirka ayaa kawada hadley dhaqdhaqaaqyada sharciga baalmarsan ee ay Dowlada federaalku ka wado gobolka Gedo, taas oo la isla qirey inay tahay faragelin qaawan oo aan sal iyo raad kulaheyn dastuurka dalka cawaaqib xumada ka dhalatana ay masuuliyadeeda qaadeyso DFS.